Maxkamadda ICJ oo markii seddaxaad dib u dhigtay dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamadda ICJ oo markii seddaxaad dib u dhigtay dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya
Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa maanta ku dhawaaqday in markii seddaxaad dib loo dhigay dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Qoraal ay soo saartay maxkamadda ICJ ayaa lagu sheegay sababta ka dambeysay dib u dhigista iyo jadwalka cusub ee dhageysiga dacwadda.
Sidoo kale, warqad ay maxkamadda ICJ u kala dirtay Soomaaliya iyo Kenya ayay ku sheegtay kadib markii ay dhageysteen codsiga Kenya usoo gudbisay maxkamadda, islamarkaana ay dib u eegis ku sameeyeen xaaladda haatan lagu jiro ee xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ayay waxay ku go’aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiska laga dhigo 15-ka bisha Maarso ee sanadka 2021-ka.
Maxkamadda ICJ ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhigtay dhageysiga dacwadaan, kadib markii ay dowladda Kenya usoo gudbisay codsi dib u dhigis ah.
Arrinta dib u dhigista dacwadda ee haatan ayaa ah mid ka duwan kuwii hore, iyadoona qoraalka ay haatan maxkamadda ICJ soo saartay lagu caddeeyay in saameynta xanuunka Coronavirus ee COVID-19 uu qeyb ka yahay go’aanka dib u dhigista.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysay si weyn uga biya diidsaneed codsiga Kenya ee ahaa in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee maxkamadda ICJ, waxayna dowladdu ku dooday in kiiskaan lagu dhageysto hab maqal iyo muuqaal ah.
Wuxuu dhageysiga billaabanayaa bisha March, 2021-ka, waxaana la wadi doonaa illaa 4 maalmood.
Isniin, 15 March, (10:00 am – 01:00 pm):– Furitaanka doodda afka ah ee dhinaca Soomaaliya, wareeggeeda koowaad.
03:00 pm – 04:30 pm:- Sii waditaanka doodda afka ah ee dhinaca Soomaaliya, wareeggeeda koowaad.
Arbaco, 17 March, ((10:00 am – 01:00 pm):- Furitaanka doodda afka ah ee dhinaca Kenya, wareeggeeda koowaad.
03:00 pm – 04:30 pm:- Sii waditaanka doodda afka ah ee dhinaca Kenya, wareeggeeda koowaad.
Khamiis, 18 March, (03:00 pm – 06:00 pm):- Doodda afka ah ee dhinaca Soomaaliya, wareeggeeda labaad.
Jimce, 19 March, (03:00 pm – 06:00 pm):- Doodda afka ah ee dhinaca Kenya, wareeggeeda labaad.